people Nepal » प्रचण्डको चीन भ्रमणः के हो वेइजिङको सन्देश ? प्रचण्डको चीन भ्रमणः के हो वेइजिङको सन्देश ? – people Nepal
१५ चैत, काठमाडौं । आफ्नो कार्यकालमा चीनको भ्रमण नै नहुने हो कि भन्ने संशयका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेइजिङको भ्रमण गरेका छन् । वोआओ सम्मेलनमा भाग लिन चीन गएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियााँराष्ट्रपति सी जिनपिङसँग महत्वपूर्ण भेटघाट गरेका छन् ।